कैदबाट मुक्त भयो गोरिल्ला, जङ्गलमा छाडिएको जोशी वातावरणमा घुलमिल हुन सक्ला ? Canada Nepal
कैदबाट मुक्त भयो गोरिल्ला, जङ्गलमा छाडिएको जोशी वातावरणमा घुलमिल हुन सक्ला ?
श्रावण ५ २०७८
बेलायतको एउटा सफारी पार्कमा रहेको एक गोरिल्लालाई जङ्गल छोडिएको छ । १३ वर्षीय जोशी बेलायतको एउटा सफारी पार्कमा हुर्किएको हो ।
यसलाई नयाँ जीवन दिन कङ्गोको निकुञ्जमा छोडिएको हो । गोरिल्लालाई जङ्गलको वातावरणमा घुलमिल हुन सक्ला या नसक्ला त्यो हेर्न बाकीँ नै छ ।
जोशीले आफ्नो नयाँ घर पहिलो पटक देखेको छ । जोशीको तौल एक सय ९० केजी छ । शान्त स्वभावको जोशीलाई कङ्गोको निकुञ्जमा छोडिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
श्रावण ५, २०७८ मंगलवार १०:०८:०० बजे : प्रकाशित
विश्वकै महँगो र अनौठो तरकारी, जसको मूल्य किलोकै एक लाख बढी पर्छ
काठमाडौं । हामिले घरमा विभिन्न थरीका तरकारी फलाएका हुन्छौं । बजारमा पनि हामिले कहिल्यै नदेखिएको तरकारी राखेको पनि देख्छौं । बजारमा पाइने हरेक तरकारीको मूल्य सिजन अनुसार फरक फरक हुन्छ । तरकारी कुनै महँगो हुन्छन्, त कुनै सस्तो ।
कुनै चीज दुर्लभ छ, चने त्यस्तो चीज धेरै महँगो हुन्छ । यस्तै विश्वमा एक अनौठो र महँगो तरकारी पनि छ । जुन यतिसम्म महँगो हुन्छ भन्ने कुरा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्दछ ।
तर संसारमा एउटा यस्तो तरकारी छ, जसको मूल्य एक किलोकै लाख रुपैयाँ बढी पर्दछ । त्यो महँगो तरकारीको नाम हो हप शूट्स ।
यो तरकारीको बोटमा लाग्ने फूललाई ‘हप कोन्स भन्ने गरिन्छ । यस तरकारीमा औषधिय गुणहरु हुने हुनाले महँगो भएको बताइएको छ। यो तरकारी जडीबुटीको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसको सेवनले धेरै रोगहरु लाग्नबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
यो तरकारी किन्दा १ लाख २८ हजार रुपैयाँ बढी पर्ने गर्छ । यो वनस्पतीको खोज उत्तरी जर्मनीमा भएको थियो । त्यसपछि यसको प्रयोग अहिले विस्तारै विश्वमा नै फैलिएको छ ।
आषाढ २७, २०७८ आइतवार २२:०२:१७ बजे : प्रकाशित
चीनमा धूलोको आँधीले यसरी निल्यो पूरै सहर (भिडियो)
पश्चिमोत्तर चीनमा मरुभूमिबाट आएको धूलोयुक्त आँधीले एउटा सहरलाई पूरै ढाक्यो।त्यहाँ धूलोको मुस्लो जमिनभन्दा १०० मिटरमाथि सम्म पुगेको थियो।
त्यतिबेला खिचिएको भिडिओमा अग्ला भवन र अन्य संरचनालाई धूलोयुक्त आँधीले निलेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ।
श्रावण १३, २०७८ बुधवार ११:०५:१२ बजे : प्रकाशित
थाइल्याण्डमा बाँदरका दुई गुटबीच घण्टौँ भीडन्त, मानिसहरु डराएर गाडीभित्रै लुके (भिडियो)
काठमाडौं - थाइल्याण्डमा एक दुर्लभ घटना घटेको छ । थाइल्याण्डको चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र लोपबुरीमा बाँदरका दुई गुटबीच भीडन्त भएको छ । बाँदरबीच १ घण्टासम्म लडाई चलेको थियो ।
लोपबुरीको फ्रा कान मन्दिरको छेउको सडकमा बाँदरहरुबीच लडाँई चलेपछि हेर्ने मानिसहरुको घुइचो रहेको थियो । बाँदरका दुई गुटबीच लडाई चलेको देख्दा मानिसहरु चकित पर्दै हेरिरहेका थिए ।
दुई गुटका बाँदरबीच लडाई चल्दा सडकमा गाडीको जाम भएको थियो । बाँदरहरु चर्को गरी कराइ रहेका थिए । १ सय भन्दा बढीको संख्यामा रहेका बाँदरहरुबीच भीडन्त हुँदा त्यहाँ रहेका मानिसहरु पनि डराएका थिए । मानिसहरु डराएर कारभित्र नै बसेका थिए ।
श्रावण १३, २०७८ बुधवार १२:१९:३७ बजे : प्रकाशित
इनार खन्ने क्रममा श्रीलंकामा भेटियो संसारकै सबैभन्दा ठूलो नीलमणि, मूल्य कति पर्ला ?
काठमाडौं - श्रीलंकामा अनौठो नीलमणि फेला परेको छ । श्रीलंकाको रत्नपुरा क्षेत्रमा फेला परेको उक्त नीलमणि विश्वकै सबैधन्दा ठुलो रहेको बताइएको छ । ५१० किलोग्रामको उक्त नीलमणि इनार खनिरहेका मजदुरले फेला पारेका हुन् ।
इनार खनिरहेको मान्छेहरुले अनौठा ढुंगा भेटेपछि साउलाई खबर गरेका थिए । गामागे नाम गरेका व्यापारीले आफ्नो घरको छेउमा इनार खन्न लगाएका थिए। ती व्यापारीलाई अनौठा ढुंगाको बारेमा भेटएको थाहाँ भएपछि जाँच्न अधिकारीहरूलाई खबर गरेका थिए ।
नीलमणि ४० करोड वर्ष पहिलेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको बीबीसीमा जनाइएको छ । अनौठा ढुंगा बारे गामागेलाई सोध्ला उनले केही बताउन चाहेनन् । गामागेको परिवारले तीन पुस्तादेखि रत्न व्यापार गर्दै आइरहेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार उक्त नीलमणिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अहिले १० करोड डलर ९११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ० रहेको बीबीसीमा जनाइएको छ । बनेको हुनसक्ने बताइएको छ ।
श्रावण १६, २०७८ शनिवार १३:२३:१५ बजे : प्रकाशित
तस्करले ल्याएका दुई चिम्पान्जी नेपालमै हुर्किए
सदर चिडियाखानामा राखिएका चिम्पू र चम्पा नामका चिम्पान्जीलाई नाइजिरिया फिर्ता पठाउन आवश्यक प्रमाण नपुगेको संरक्षण अधिकारीले बताएका छन्। सन् २०१८ मा नाइजिरियाबाट टर्की हुँदै तस्करले ती चिम्पान्जीलाई नेपाल ल्याएका थिए।
तर आवश्यक प्रमाण नपुगेकोले नयाँ खोर बनाएर जावलाखेलस्थित चिडियाखाना मै प्रदर्शनीमा राख्ने योजना बनाइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ।
फेला पर्दा साढे तीन केजीको चिम्पू र चार किलोकी चम्पा अहिले क्रमश: १७ र १९ किलोका भएका छन्। पहिला निकै बिरामी पर्ने उनीहरू अहिले स्वस्थ छन्।
उद्‌धार गरिएका वन्यजन्तुलाई सम्बन्धित मुलुकमै फिर्ता गरिनुपर्ने भए पनि प्रमाणका कारण नेपालमै राखिने भएपछि उनीहरूको रेखदेख गर्दै आएका रामकाजी पहरीले निकै खुसी व्यक्त गरे।
गुफा, हाँगाबिँगा, पानीसहितको वातानुकूलित खोर बनाउन निर्धारित समयमा आवश्यक बजेट निकासा भएमा झन्डै एक वर्षभित्र ती चिम्पान्जी प्रदर्शनमा राखिने छ।समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
श्रावण १६, २०७८ शनिवार १५:०२:३७ बजे : प्रकाशित